सामसङको NX Series का Mirrorless क्यामराहरु बजारमा - Technology Khabar
» सामसङको NX Series का Mirrorless क्यामराहरु बजारमा
सामसङको NX Series का Mirrorless क्यामराहरु बजारमा
Technology Khabar १४ आश्विन २०७१, मंगलवार
काठमाडौँ, १४ असोज । सामसङले आफ्ना नेपाली ग्राहकहरुका लागि Mirrorless क्यामराहरुको नयाँ संस्करण – सामसङ NX Series – प्रस्तुत गरेको छ । बजारमा उपलब्ध अन्य DSLR को तुलनामा यी Mirrorless क्यामराहरु हलुका र सानो हुने र यिनमा थोरै मात्र सामानहरु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसका साथै यसमा अन्य Digital Camera वा Compact Camera हरुमा भन्दा फोटो खिच्दा शटरको आवाज पनि निकै कम हुन्छ । यी नयाँ NX30, NX300 र NX3000 क्यामराहरुले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट मूल्यमा निकै धेरै विशेषताहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
Samsung NX30 २०.३ मेगापिक्सेलको क्यामरा हो जसमा APS-C CMOS का साथै ३ इन्चको Super AMOLED Swivel र Touch Display र ifunction भएको १८–५५ मिलिमिटरको लेन्स रहेको छ । यसले १–२५,६०० सम्मको Auto ISO पनि छ । साथै यस क्यामराबाट तपाईँ MP4 भिडियो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ जुन NTSC, PAL तथा HDMI 1.4a सबैमा चल्छ । मात्र ३७५ ग्राम तौल भएको यस क्यामरामा SD, SDHC, SDXC र UHS-1 मेमोरी कार्डहरु प्रयोग हुन्छन् । यस Samsung NX30 को बजार मूल्य रु १,०९,९९० रहेको छ तर सामसङको दसैँ अफर “द बिग डिल” बाट यो क्यामरा केवल रु ९०,००० मा उपलब्ध छ ।
आफ्नो संस्करणलाई अझै बढाउँदै सामसङले Samsung NX300 पनि उपलब्ध गराएको छ । Samsung NX300 २०.३ मेगापिक्सेलको क्यामरा हो र यसमा APS-C CMOS Sensor रहेको छ । यस क्यामरामा ३.३१ इन्चको (८४.० मिलिमिटर) AMOLED Tilt Display छ । यसको 8.6fps को क्षमताका माध्यमबाट ग्राहकहरुले थोरै समयमै धेरै फोटोहरु खिच्न सक्नेछन् । यस Samsung NX300 को बजार मूल्य रु ७७,९०० रहेको छ तर सामसङको दसैँ अफर “द बिग डिल” बाट यो क्यामरा केवल रु ६५,००० मा उपलब्ध छ ।
Samsung को तेस्रो प्रस्तुतीसंगै Samsung NX 3000 को आश्चर्य कायम छ । सुविधाजनकरुपमा आफ्नो फोटो खिच्नका लागि3inch flip-up display, Samsung NX 3000 को साथ 20 MPAPS-C CMOS sensor रहेको छ र 5fps को गतिमा फोटो खिच्न सक्छन् । “द बिग डिल” अफरमा Samsung NX 3000को बजार मूल्य रु. ५९,९९० रहेको छ, तर तपाईंले यो दशैंमा रु.५००००मा पाउन सक्नुहुनेछ ।
यसका साथै यस Samsung NX series का क्यामराहरुमा wifi पनि जडान गरिएको छ जसबाट ग्राहकहरुले फोटो Dropbox, Flickr, Facebook, Picasa, YouTube र अन्य सामाजिक संजालहरुमा सेयर गर्न सक्छन् । Samsung NX series का क्यामराहरुमा wifi NFC’ Tag and go connectivity option रहेको छ जसले प्रयोगकर्तालाई जहिले पनि समय र संसारसंग जोडि राख्छ र छिटो र प्रभावकारीरुपमा फोटो सेयर गर्न मद्दत गर्ने कम्पनीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७१, मंगलवार
डेटिंग साइट ह्याक, गोप्य जानकारी लीक, कतै तपाइँको पनि पर्यो कि ?
नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाहरुको रिचार्ज *४१२# डायल गरेर गर्न सकिने
ओप्पोद्धारा सेल्फी एक्स्पर्ट एफथ्री सार्वजनिक, ग्रुप सेल्फीका लागि डबल सेल्फी क्यामरा
टेक कम्पनी गूगलले भारतीय मोबाइल अपरेटर भोडाफोन आईडियामा लगानी गर्ने
नासाले जारी गर्यो पर्सिभेरन्स रोभर अवतरणको रोमान्चक भिडियो